Thwebula AdAway 3.2 – Vessoft
AdAway – isofthiwe omuhle ukuvimba ukukhangisa. Isofthiwe Amafayela base le-inthanethi ukuthi ngokuvamile imithombo wokukhangisa emabhuloki ukufinyelela kuzo. AdAway kwenza ukuba ibhale izinhlu abamhlophe nabansundu kusuka web sites okuyizinto ezingathandeki ukuze uvimbele noma noHezekeli kubalulekile ukuba anciphise ukufinyelela abanye babo. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlele izinhlu umthombo Sebawoti noma ukulanda tinhla eyengeziwe kusukela website. Futhi AdAway uyakwazi ukuskena uhlelo lwakho for ukuba khona yokukhangisa kusukela lapho kungenzeka ukuqeda ngenxa ukususwa izicelo eboniswe ngenxa zithwetshulwa.
Ihlola izibuyekezo yokukhangisa amakheli
Ukudala uhlu abamhlophe nabansundu
Ukuhlela umthombo uhlu Sebawoti
Ukufuna non-luvimbe ukukhangisa
Amazwana on AdAway:
AdAway Ahlobene software:
English, Español, 中文, Português... Bona software xaxa